Indlela Amadoda afanele Ukunxiba Kakuhle- Iingcebiso kuMadoda aStylish | Amadoda aseStylish
Indlela Amadoda Afanele Anxibe Kakuhle Ngayo
Indoda ithanda ukugqoka kakuhle kwaye inakekele umfanekiso wayo. Ukuphucula ngcono incasa kunye nobuchule, kufuneka ukhethe amanqaku apho banokukukhokela khona indlela yokwazi ukudibanisa iimpahla kunye nemibala. Ukunxiba kakuhle kukwazi ukuziqhelanisa nawo wonke umzuzu kunye neemeko, rhoqo ngencasa kunye nobuntu.
Ukuqala ngesitayela esihle, kufuneka uhlale ukhumbula indlela yokuphila kunye nokubonakala komzimba. Umntu omfutshane akafani nomntu omde, indoda enehips ezibanzi okanye ezibhityileyo ... yiyo lonto Siza kuzo zonke iinkcukacha oko kuya kusenza umahluko.
1 Iingubo ezisisiseko kwiwadi yakho
2 Unxiba njani kuxhomekeke komzimba
Iingubo ezisisiseko kwiwadi yakho
Kuhlala kuluncedo ukuba nekhabhathini yakho ezo zingubo zisisiseko ziya kuhlala iminyaka emininzi kwaye zinokuba njalo dibanisa nayo nayiphi na enye impahla. Kukulungele ukusebenzisa isambatho esisisiseko kwaye udibanise kunye nento enemfashini.
IiCowboys: Zezinye zeengubo ezifanelekileyo kwiwadi yakho. Ijini okanye ijini zidlala eyona ndima yazo ifanelekileyo xa zingumthunzi ohlaza okwesibhakabhaka, nokuba kukhanya okanye kumnyama. Zibukeka zintle ngebhatyi eblazer, iihempe, izikipa okanye iijezi.
Iibhulukhwe zomqhaphu: Yenye into ebalulekileyo kwaye ezona zisebenza ngcono zezo zesimbo saseTshayina. Ukusikwa kwakhe kukudala kwaye akuveli kwisimbo sakhe, kwaye unemibala emininzi anokukhetha kuyo. Ngokuqinisekileyo, xa kuziwa ekuhlaleni kunye umbala ohlala ungathathi hlangothi ukutshatisa nawuphi na omnye umbala, njengomthunzi omnyama okanye beige.
Ihempe emhlophe okanye ecacileyo: Ukuba umbono kukunxiba kakuhle amaxesha ngamaxesha, ukuba nehempe emhlophe ihlala isebenza. Isebenza ngokufanayo kuzo zombini izihlandlo ezisesikweni neziqhelekileyo. Ukuba awuzithandi ezimhlophe kakhulu, ungasebenzisa iihempe zomnye umbala okhanyayo, kodwa ngaphandle kohlobo lomzobo.
Isuti yelokhwe: le seti yebhatyi kunye neebhulukhwe zenza i-joker egqibeleleyo, ezifanelekileyo zezo zinemibala esisiseko, enje ngwevu, mnyama okanye luhlaza okwesibhakabhaka. Ukusikwa kweebhulukhwe kuwina umdlalo ingena kwbabhityile kunye neebhatyi isitayile seblazer, ke unokuyifaka kolunye uhlobo lweebhulukhwe. Ingcebiso enye: zama ukuthenga isuti ngesiphelo esihle, esihlala sikhangeleka ngathi si-ayiniwe kunye nelaphu elilungileyo, nokuba oko kukuxabisa imali ethe kratya.
Izihlangu: eli nqaku yinto yobuqu ngakumbi. Kukho amadoda akhetha ukuba nawo ipere entle yezihlangu ezinqabileyo kwaye oko kuhlala iminyaka emininzi. Kwelinye icala, sinoluvo lolutsha apho lukhetha khona a iiteki ezikhululekileyo nezingaqhelekanga. Ngokuqinisekileyo awungekhe uphose izihlangu ezilungileyo ezikhululekileyo kunye nezemidlalo, ezinokudityaniswa ngendlela entle nengaqhelekanga.
Unxiba njani kuxhomekeke komzimba
Indlela yokunxiba ihambelana nomzimba womntu, for amadoda amade Kubalulekile ukulinganisa inani leengubo. Zikhangeleka kakuhle kakhulu iibhatyi zaseMelika thayipha iiblazers, i-t-shirts ezinde nazo zonke iipateni kunye nemizobo oyifunayo. Iibhulukhwe zibhetele kwezo ingena kwbabhityile, zibenze ngqo. Izihlangu kufuneka zibekhona kunye neenzwane ezijikeleziweyo, ezo zinobume obuchaziweyo azilingani kakuhle njengoko zinokuphucula ubude benyawo. Ngokufanayo sinokulungelelanisa imilo ejikeleziweyo kuwo onke amateki, iibhutsi kunye neebhutsi zamaqatha.
Amadoda amafutshane nabo banamaqhinga abo amancinci. Sukujonga iihempe okanye iimpahla ezikhululayo, kodwa kufanelekile ngobude besinqe kwaye uphantse wathomalalisa. Ibhlukhwe kufuneka inqunyulwe 'ingena kwbabhityile' njengoko iya kwandisa umlenze kwaye ibonakale ichazwe ngakumbi kwaye inciphile. Ushicilelo nge Imigca ethe nkqo yenza isitayile ukuba siqine, ekubeni i-horizontals iya kuba banzi umzimba. Ukuba kunokwenzeka, sebenzisa isethi yeempahla zombala ofanayo kwaye ukuba unokugqoka izicathulo eziphezulu ezingcono kakhulu.
Amadoda abhityileyo Banamaqhinga abo okuba bangabonakali benciphile kakhulu. Iimpahla ezigqwesileyo kunye neebhulukhwe ezineepokethi ezisecaleni zibukeka zilungile kuzo, yonke into kukunika umthamo omncinci kumzimba. Iibhulukhwe ezithe nkqo Zibukeka zilungile, kodwa zisikiwe kakhulu ibhityile, ibhityile okanye iqinile zibenza babonakale bebhityile. Iihempe kufuneka zibe banzi kwaye ukuba awukho mfutshane kakhulu, ezide zinokubonakala zilungile.
Amadoda achubekileyo Bakwafuna amaqhinga abo amancinci kwaye ngenxa yoku kufuneka bakhangele iimpahla ukusikwa ngokuthe tye kunye nomgca. Sukuthenga iimpahla ezixineneyo ongenakukwazi ukuzinxiba ngelinye ixesha kwaye ungadibanisi iingubo ngokungafaniyo namadoda amancinci. Imibala eziva ngcono yileyo ibonelela ngokungathathi hlangothi: mnyama, grey, brown, beige, njl. Le mithunzi ibonakala ilungile kwaye isusa iipounds ezongezelelweyo.
Ukugqiba kunye nokongeza iinkcukacha ezincinci sinokucebisa oko ungaze uthathwe yimikhwa emitsha. Banokuba sisitayile sakho, kodwa amaxesha amaninzi ayisiyiyo eyona khetho ikhethekileyo kwaye sinokuba siphosakele. Landela isitayela sakho kwaye ungathathelwa yimfashini njengoko sijongile, nangona inokusetyenziswa rhoqo iziqwenga eziguquguqukayo kunye neziqhelekileyo ukuba ngokuqinisekileyo banyulwe ngempumelelo elungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Indlela Amadoda Afanele Anxibe Kakuhle Ngayo
Indlela yokucheba iinwele zenkwenkwe
Iinwele zanamhlanje zamakhwenkwe